Koox dibad-baxayaal ah oo aad u ballaaran ayaa hor deganaa dibedda xarunta tan iyo maalintii sabtidii, waxayna dalbayanaan inuu soo geba geboobo xukunka 30 jirka ah ee madaxweyne Al-Bashir.
Xarunta ciidamada milatariga, ayaa waxaa sidoo kale ku yaalla guriga Al-Bashir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga.
Wasiirka arrimaha gudaha Sudan, Bushara Juma ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibad-baxayaal ay isugu baxeen dibedda xarunta ciidamada milatariga, taasi oo ah mid ka mid ah isu soo baxyadii ugu weynaa tan iyo markii mudaahaaradyada ka dhanka ah Al-Bashiir ay billowdeen 3 bil ka hor.
Lix qof ayaa lagu dilay magaalada Khartoum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala cayriyeen dibad-baxayaasha. Sidoo kale, qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibad-bax kale oo ka dhacay magaalada Darfur.
Abaabulayaasha dibad-baxa ayaa ugu baaaqay dadka degan Khartoum iyo hareeraheeda inay kusoo biiraan mudaaharaadka.